Sheekh caan ah oo lagu dilay Gaalkacyo iyo duqa magaalada oo dawladda ugu baaqay in ay soo faragaliso xaaladda. – Radio Daljir
Sheekh caan ah oo lagu dilay Gaalkacyo iyo duqa magaalada oo dawladda ugu baaqay in ay soo faragaliso xaaladda.
Abriil 16, 2011 12:00 b 0
Gaalkacyo, April 16 – Allaha u naxariistee waxa duhurkii maanta magaalada Gaalkacyo lagu dilay sheekh Ismaaciil Xaashi Xuseen oo ahaa sheekh waacid ah oo aad looga yaqaan magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobollada Puntland.
Sheekh Ismaaciil oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda caddaaladda iyo awqaafta ee Puntland ayaa dilkiisa loo adeegsaday qaraxa meesha fog laga hago.
Qaraxa ayaa ka dhacay xarunta shikaddii STG ee magaalada Gaalkacyo, waxana sidoo kale halkaa dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen laba nin oo la socday Sheekha geeriyooday.
Dareenka dadwaynaha magaalada Gaalkacyo aad u kacsan iyada oo loo isu diyaarinayo aaska marxuumka oo lagu wado in uu ka dhaco xarun-diineedka Heema oo qiyaasta 70 KM dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gaalkacyo una dhow Bacaadwayn. Dad wayne caraysan oo koox-koox u socda ayaa dhex maraya magaalada illaa iyo haddana ma cadda in uu yahay isku soo bax qorshaydan iyo in uu yahay mid iskii isaga biloowday.
Ma jirto cid loo qabtay dilka sida u Daljir u sheegay duqa magaalada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamudu X. Xasan, wuxuuna intaa ku daray in xaaladda magaaladu dhaaftay meel duq magaalo iyo ciidan magaalo wax ka qaban karo isaga oo dawladda dhexe u jeediyay in ay soo faragaliso xaaladda magaalada. Duqu waxa uu ku celceliyay in ay adagtahay in la sugo ammaanka magaalada Gaalkacyo bacdamaa ay ku taallo magaalo kala qaybsan.
Daljir kala soco wixii war ah ee ka soo kordha xaaladda Gaalkacyo iyo dilka Sheekh Ismaaciil.
Gaalkacyo: Masaajidka Salaaxu-diin oo la weeraray iyo mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay magaalada.
Al-shabaab oo nin siyaasi ah ku dilay Kismaayo, kadib markii lagu eedeeyay xiriir u la leeyahay dawladda federaalka.